Pandaive mwana, zvitsitsinho zvakakwirira chingori chiroto kwandiri. Nguva dzese kupfeka shangu dzisina kukodzera dzamai vangu, ndinogara ndine shungu dzekukura nekukurumidza, chete nenzira iyi, ndinogona kupfeka zvinyowani uye zvirinani zvitsitsinho. makeup yangu uye dress rakanaka, ndozvandinofunga sekukura.
Mumwe munhu akati inhoroondo inosiririsa yechitsitsinho, uye vamwe vakati muchato wega wega inhandare yezvitsitsinho. Ndinosarudza chirevo chekupedzisira.
Musikana, uyo akafungidzira kuti kugona kupfeka chitsitsinho chiya chitsvuku pamhemberero yake yekuuya-kwe-zera, nemoyo wakasuwa, kutendeuka, kutenderera, kutenderera. Pa 16, akadzidza kupfeka shangu dzakakwirira. akasangana nemurume chaiye. Pamakore makumi maviri, mumuchato wake, ndeupi makwikwi ekupedzisira aakange achida kuvemo. Asi akazviudza kuti musikana anopfeka chitsitsinho chakakwirira anofanira kudzidza kunyemwerera nekuropafadza.
Akanga ari pauriri hwechipiri, asi chitsitsinho chake chakakwirira chakasiiwa pauriri hwekutanga. Akabvisa chitsitsinho chepamusoro ndokunakidzwa nerusununguko rweiyi nguva. Mangwanani akatevera aipfeka chitsitsinho chake chitsva otanga nyaya nyowani, hazvina kumukwanira iye chete.
Akagara achida shangu, kunyanya dzakakwirira zvitsitsinho. Hembe idzi dzinogona kuve nerupo, uye vanhu vachati iye akanaka, zvakare hembe dzinogona kusungwa, uye vanhu vachati iye akanaka. Asi shangu dzinofanirwa kunge dzakaringana, kwete chete kukodzera, asi zvakare dzinogutsa. Iyi mhando yekunyarara kwekunyarara, uye mukadzi akadzama narcissism futi. Kungofanana negirazi rinotsvedza rakagadzirirwa Cinderella. Mukadzi anozvifunga uye asina maturo haagoni kuzvipfeka kunyangwe akagurwa zvigunwe. Kunakisa kwakadaro ndekwe rucheno uye kudzikama kwemweya chete.
Iye anotenda kuti mune ino nguva, vakadzi vanogona kuve vanonyanya kuita narcissistic. Kungofanana nekubvisa chitsitsinho chake chakakwirira panguva iyoyo, ndokupfeka chitsitsinho chitsva. Anotarisira kuti vanhukadzi vasingaverengeke vachapihwa simba nekutsika zvitsitsinho zvavo zvisina kumira zvakanaka.
Akatanga kudzidza vakadzi shangu dhizaini, akamisikidza yake yega R & D timu, uye akatanga yakazvimirira shangu dhizaini dhizaini muna 1998. Akatarisa kutsvagurudza maitiro ekugadzira iwo akasununguka uye ane fashoni vakadzi shangu. Aida kutyora maitiro uye nekungomisazve zvese. Kuda kwake uye kutarisa kwake indasitiri zvakamuita iye kubudirira kukuru mumunda wefashoni dhizaini kuChina. Dhizaini yake yekutanga uye isingatarisirwe, inosanganisirwa neake akasarudzika ekuona uye hunyanzvi hwekusona, vatora mhando kuenda kunzvimbo dzakakwirira Kubva muna 2016 kusvika 2018, mhando yakanyorwa pamhando dzakasiyana dzemafashoni, uye yakapinda muchirongwa chepamutemo cheFashoni Svondo. MunaAugust 2019, iyo kadhi yakahwina zita rechiratidzo chakakurumbira chevakadzi shangu muAsia.
Muhurukuro yazvino, muvambi akabvunzwa kuti arondedzere dhizaini yake mumashoko. Haana kuzeza kunyora mashoma mapoinzi: mimhanzi, mapato, zvinhu zvinonakidza, kurambana, kudya kwekuseni, nevanasikana vangu.
Bhutsu dzakasununguka, dzinogona kubatisisa runako rwakakombama rwemhuru dzako, asi kure nekusanzwisisika kwemabhurasi. Usataure bofu kuti vakadzi vanongova nemazamu anonaka. Anodakadza sekisheni anobva mukunyepedzera, kungofanana nezvitsitsinho. Asi ini ndinofunga tsoka dzakakosha kudarika kumeso, uye zvakaoma, saka isu vakadzi ngatipfeke shangu dzatinofarira uye tiende kudenga muzviroto zvedu.